Haleellaa baadiyyaa Kaameeroon keessatti raawwateen namoonni 22 ajjeefamaniiru - BBC News Afaan Oromoo
Haleellaa baadiyyaa Kaameeroon keessatti raawwateen namoonni 22 ajjeefamaniiru
Kaaba-lixa Kaameeroonitti namoonni 22 ajjeefamanuusaanii UN gabaaseera.
Namoota iddoo Ntuumboo jedhamtu keessatti ajjeefaman keessaa walakkaan isaanii daa'imman yoo ta'an miidhamtoonni hedduun immoo osoo lubbuun jiranii awwaalamuusaanii miidiyaan biyya keessaa gabaaseera.
Taatee gaafa Jimaataa uumame kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate jiraatuu baatus paartiin mormituu garuu waraanaa biyyatti qeeqeera.
Gareelee biyyattii gargar fottoqsuuf lolaa jiran waliin waggoota sadii oliif lolatti kan jiru mootummaan Kaameeroon hamma ammaatti haleellaa raawwaterratti yaadaa hin kenninne.
Hojjataa UN kan ta'e Jemis Nunaan BBC'tti akka himetti namoota ajjeefaman keessaa dubartiin ulfaa ni jirti jedheera.
Daa'imman 14 ajjeefaman keessaa saglan isaanii daa'imman ganna 5 gadiitti jedheera.
Obbo Nunaan akka jedhetti taatee kun jiraattoota naannichaatiif "hamaa" ture jedheera.
Du'a mormitoota bilisummaa Kaameeruun
"Gareen kamuu haleellaa kana raawwatus waldhabdee gara fuulduraa uumamuu danda'uuf sodaa ta'uu danada'a," jedheera. "Namoonni nuti dubbisne sodaa guddaa keessa turan. Wanti kun ni raawwata jedhanii hin eegne."
Agboora Mbaallaa namni sochii siyaasaa keessatti beekamtii qabus haleellaa kanaaf "waraana biyyattiitu itti gaafatamumummaa qaba," jedha.
Qondaltonni waraanaa biyyattii AFP waliin gaaffi fi deebii taasisan qeeqa kana haalaniiru.
Eega mormiirratti humnoonni nageenyaa haleellaa raawwachuu jalqaban booda bara 2017 gareeleen addatti hidhatan baay'achaa dhufaniiru.
Gareen hidhatan kunneenis biyya haaraa kan Ambaazooniyaa jedhanii waamaniif walabummaa labsaniiru. Pireezidaantiin Kaameeroon Paawul Biyya garuu garee kanneen "shorarkeesitootaa" jechuun murteesaniiru.
Eega waldhabdeen kun jalqabee as namoonni 3,000 ol ta'an yoo du'an namoonni 70,000 ol ta'an immoo qe'eesaaniirraa buqqa'aniiru.
Mootummaan Kaameeroon dhiittaa mirga namoomaatiin ni qeeqama. Akkasumas pireezidaant Donaald Tiraamp daldala addaa biyyattiin Ameerikaa waliin taasiftu adda kutaniiru.
Mootummaan akka jedhetti gareen addaatti hidhatan kunneen lammii nagaa fi humnoota nageenyaa heddu ajjeesaniiru.
Ta'us garuu lakkofsi lammiilee nagaa fi miseensota addatti hidhatanii kan humnoota mootummaan ajjeefamuu ibsu hin jiru.
Mormiin bilisummaa Kameeroon keessatti godhame ajjechaa fide
Lammiileen Keeniyaa hundi maaskii akka godhatan gorfaman
Namoonni sirna awwaalchaa fira isaaniirratti argaman poolisiin to'ataman
Loltoonni manaa bahuun yeroo dhorkamee jirutti dubartoota gudeeduun himataman
Eertiraan COVID19 ittisuuf hidhamtoota akka gadhiiftu gaafatamte